Xildhibaan madow ah oo sawirkeeda loo adeegsaday sida qof la adoonsaday | Hangool News
Hangoolnews:- Wargeyska midigta fog ee ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa guud ahaan laga dhalleeceeyay masraxa siyaasadeed ka dib markii haweeney xildhibaan madow ah uu ku tilmaamay qof la addoonsaday.
Warbixintan oo lagu qoray wargeyska Valeurs actuelles, wuxuu ku eedeeyay in dadka Afrikaanka ah ay ku lug leeyihiin addoonsiga, waxayna soo qaaten sawirka Ms Daniele Obono oo qoorta bir ugu jirto.
Ra`iisal Wasaare Faransiiska Jean Castex ayaa sheegay in warbxinta la daabacay ay tahay mid karaahiyo ah.
Wargeyska ayaa raaligeliyay Ms Obono laakiin waxay beeniyeen in maqaalkooda uu yahay mid cunsuri ah.
Ms Obono waxay ku dhalatay dalka Gabon, waana guddoomiye ku xigeenka xisbiga garabka bidix ee barlamaanka Faransiiska, waxayna matashaa deegaan baarlamaaneed ku yaalla magaalada Paris.
Waxayna boggeeda Twitter-ka soo dhigtay sawirka oo ay ku qortay in ereyada “kooxaha midigta fog ay yihiin kuwa xun, oo doqonnimo ah iyo naxariis darro”.
“Sawirkani wuxuu bahdilaad iyo aflagado ku yahay awoowayaashay, qoyskeyga iyo dhaqdhaqaaqeyga siyaasadeed,” ayay tiri, waxayna intaasi ku dartay in ay diyaar u tahay in ay la dagaallanto cunsurinimada si ka duwan sidii hore, si loo helo xorriyadd iyo sinnaan.
Xafiiska Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa sheegay in Madaxweynaha uu khadka talefoonka kula hadlay Ms obono uuna “si cad u cambaareeyay nooc walbo oo cunsuriyad ah”.
Wallerand De Saint-Just, oo ah sarkal sare oo ka tirsan ololaha midigta fog ayaa cambaareeyay wargeyska wuxuuna sheegay inay Ms obono xaqireen.
Faransiiska waxaa ka dhacay bannaanbaxyo waawayn bilihii June iyo July oo lagu cambaareynayay addoonsigii xilligii gumaysiga iyo cunsuriyadda ee Faransiiska ka jirta hadda, arrintaas oo ay dhiirrigelisay dhaqdhaqaaqa loogu magac daray Nolosha Madowga waa Muhiim, ka dib cadhadii ka dhalatay dilkii booliska Mareykanka ay u geysteen George Floyd.
Madaxweyne Emmanuel Macron wuxuu wacad ku maray inuu la dagaallamayo cunsuriyadda laakiin wuxuu sheegay in Faransiiska uusan meesha ka saari doonin taallooyinka muranka badan dhaliyay ee shaqsiyaadkii xilligii gumeysiga ay geysteen.
Waxaa jiray ololeyaal ka dhan ah taallooyinka noocan oo kale ah oo ka dhacay Britain iyo Mareykanka.
“Qoraalkeennu ma aha mid cunsuriyad laga dheehan karo,” waxaa sidaas lagu qoray wargeyska.
“Waa wax iska caadi ah in kuwa naga soo horjeeda ay eedeymo noo soo jediyaan.”